सिंगापुरको चामत्कारिक सफलताको कथा : यी ५ कारणले धनी बन्यो सानो एसियाली मुलुक
काठमाडाैं | पुस १५, २०७८
सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण कोरिया र ताइवानलाई एसियाका चार बाघहरू भन्ने गरिन्छ । केही महिनाअघि सिंगापुरले अमेरिका र हङकङलाई पछि पारेर संसारको सबभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको दर्जा हासिल गरेको थियो ।
स्विट्जरल्यान्डको बिजनेस स्कूल आईएमडीले जारी गरेको सूचीमा सिंगापुर अग्रस्थानमा रहेको हो । आईएमडीले कुनै पनि देशमा कम्पनीहरूले दिगो विकास हासिल गर्न, रोजगारी उत्पन्न गर्न तथा नागरिकहरूको कल्याणमा वृद्धि गर्न कत्तिको वातावरण पाउँछन् भन्ने आधारमा सूची तयार पार्ने गर्छ ।
सिंगापुर अत्याधुनिक प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष श्रमिकको उपलब्धता, सहज आप्रवासन कानून र नयाँ व्यापार शुरू गर्नका लागि सहजताका कारण शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको बताइन्छ ।
दक्षिणपूर्वी एसियाको सानो मुलुकले यस्तो उपलब्धि कसरी हासिल गर्न सक्यो ? सिंगापुरमा दुई वर्षभन्दा बढी समय बिताएका एक विदेशीको आँखामा उक्त मुलुकको सफलताका कारणहरू बखान गरिएको छ ।
१. भूगोल र छिमेक
सिंगापुर दक्षिणपूर्वी एसियाको बीच भागमा रणनीतिक रूपमा अवस्थित व्यापार तथा बन्दोबस्तीको सामानको केन्द्र हो । उदाहरणका लागि, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा तेल निर्यात गर्नुछ भने पश्चिम एसियाबाट आएका कन्टेनर जहाजहरू छोटो बाटोका लागि सिंगापुरस्थित मलक्का जलसन्धि हुँदै जानुपर्ने हुन्छ ।
ती जहाजले बीचमा तेल नहालिकन पूरा यात्रा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कन्टेनर जहाजहरूका लागि व्यापारको केन्द्रका रूपमा सिंगापुर प्राकृतिक रूपमा नै सही भूगोलमा छ ।
२. स्थिर राजनीतिक वातावरण र नीति
पिपुल्स एक्सन पार्टी सिंगापुरको प्रमुख मध्यमार्गी– दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हो । सन् १९५४ मा स्वतन्त्रता माग्दै खोलिएको दल त्यसअघि विद्यार्थी संगठनका रूपमा रहेको थियो । यसले सिंगापुरको राजनीतिक प्रणालीमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको छ ।
उक्त दलका एक संस्थापक सदस्य ली क्वान यू सिंगापुरका प्रथम प्रधानमन्त्री हुन् । उनले तीन दशकसम्म शासन चलाए । लीलाई सिंगापुरका राष्ट्रपिता मानिन्छ र उनकै नेतृत्वमा तेस्रो विश्वको मुलुक पहिलो विश्वको मुलुकका रूपमा विकसित भएको हो ।
लीले विभिन्न विधि अपनाएर देशमा कठोर एकदलीय शासन चलाए जसले गर्दा उनलाई सानो मुलुकमा आफ्नो विशाल भिजनलाई साकार पार्नका लागि वास्तविक शक्ति दियो ।
स्थिर एकदलीय शासन भएको राजनीतिक प्रणालीले आर्थिक वृद्धिका लागि मलिलो आधार प्रदान गरेको छ । ली जस्ता दूरदृष्टि भएका नेताको आकर्षक नेतृत्वमा सिंगापुर अन्य विकासशील मुलुकहरूभन्दा निकै अघि बढ्न सकेको हो ।
मास्टर प्लान नामक सरकारी भूमिप्रयोग योजनाले सिंगापुरलाई मध्यकालीन अर्थात् १० देखि १५ वर्षसम्मको विकासलाई निर्देशन गर्छ । यसलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरिन्छ र यसले सरकारको बृहत् दीर्घकालीन रणनीतिलाई विस्तृत योजनामा परिणत गर्छ जसमार्फत भूमि र घरजग्गाको विकासलाई निर्देशित गरिन्छ ।
दक्षिण कोरियामा यसको ठ्याक्कै विपरीत हुने गरेको छ । त्यहाँ सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पूर्व सरकारको नीतिलाई उल्ट्याइने गरिन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति मून जे–इन सत्तामा आएपछि आणविक विद्युत् भट्टीहरूलाई बन्द गराए । विगत कैयौं दशकमा विकसित भएको ठूलो उद्योग ध्वस्त भयो । दीर्घकालीन योजना बनाउने हो भने नीतिमा स्थिरता हुनु जरूरी छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ ।
हङकङ पनि सिंगापुर जस्तै सानो नगरराज्य हो र त्यहाँ पनि कारोबारमैत्री वातावरण छ अनि त्यहाँ विगतमा धेरै लगानी हुने गरेको थियो । तर हालैका दिनमा हङकङमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले कसरी राजनीतिक जोखिमबाट व्यापारलाई नकारात्मक असर पार्छ भनी देखाएको छ ।
३. चुस्तदुरुस्त तथा सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र
सिंगापुरका प्रतिभाशाली युवा सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न जान्छन् । पढाइ सकेपछि उनीहरूलाई सिंगापुर फर्किन र कैयौं वर्षसम्म सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्न लगाइन्छ ।
त्यसबाहेक सिंगापुरमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई राम्रो तलब दिने नीति लामो समयदेखि नै छ । कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धात्मक रहिरहून् भनी सरकारले तलबको समीक्षा तथा सुधार नियमित रूपमा गर्ने गरेको छ ।
देशले आर्थिक लाभ पाएसँगै सरकारी कर्मचारीले पनि बोनस पाउने गरेका छन् ।
राम्रो तलब पाएमा सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा यी नीतिहरू बनाइएका हुन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरिएमा सरकारले दोषीलाई निकै कठोर कारवाही गर्छ ।
राम्रोलाई पुरस्कार र खराबलाई दण्ड दिने यस नीतिका कारण सिंगापुरमा सरकारी क्षेत्रप्रतिको आकर्षण बढाएको छ । प्रतिभाशाली नागरिकहरू सरकारी काम गरेर समाजलाई योगदान गर्न चाहन्छन् ।
यसको प्रभावकारिताको एक उदाहरण यातायात मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ । यस मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात प्रणालीका विषयमा मिश्रित दृष्टिकोण अपनाएको छ ।
त्यसअन्तर्गत उसले राष्ट्रियकरण गरिएको प्रणालीको कामकाज (सरकारले बस सेवा, रेल लाइन र सञ्चालन मापदण्डको निगरानी गर्ने) सँग निजी क्षेत्रको कार्यक्षमता (निजी कम्पनीहरूले गर्ने बस र ट्रेन सञ्चालन) लाई मिश्रण गर्ने गरेको छ ।
४. व्यापारमैत्री वातावरण
सिंगापुर करको कम दरहरूका लागि प्रख्यात छ । त्यहाँ आय र कर्पोरेट करहरू संसारकै सबभन्दा कममा गनिन्छन् । त्यसमाथि विभिन्न करमा छुट पनि दिने गरिन्छ । पूँजीगत लाभ, लाभांश, पैतृक धन र उपहारमा कुनै कर लाग्दैन । सुन र चाँदीको कारोबार केन्द्र बन्न खोजेको सिंगापुरमा तिनको कारोबारमा कुनै कर लगाइँदैन ।
सरकारले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र तथा उद्योगहरूमा गर्ने सहयोगले विदेशी लगानी तथा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अझ, सरकारी कर्मचारीहरू प्रायः जसो शिक्षित सम्भ्रान्त हुन्छन् र उनीहरूलाई कुन उद्योगमा जोड दिने र प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ ।
५. असमानताका बावजूद सहज जीवनयापन
द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि हुँदा असमानता बढ्नु अवश्यम्भावी छ । जिनी कोएफिसिएन्टमार्फत मापन गर्दा सिंगापुरमा असमानता उच्च नै देखिन्छ ।
सरकारले क्षमतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा विश्वास राख्ने गरेको र कम सुविधा पाएका व्यक्तिहरूलाई अवसरमा पहुँच दिलाउनका लागि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउने गरेको छ । सबैजनाको उदय होस् भन्नका लागि कम सुविधा पाएकाहरूलाई उपलब्ध अवसरको भरपूर फाइदा उठाउन र खाडलहरू पुर्न सरकारले प्रयास गर्ने गरेको छ ।
असमानता उच्च भए पनि सिंगापुरमा कम धन भएकाहरूलाई सहजै जीवनयापन गर्नका लागि वातावरण बनाइएको छ ।
सिंगापुरको बस र सबवे लगायतको सार्वजनिक यातायात गुणस्तरीय छ अनि बेलायत र अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूको तुलनामा सस्तो पनि छ ।
सिंगापुरमा कार किन्न चाहिँ साह्रै महंगो पर्छ । सरकारले गाडीहरूको संख्यालाई सीमित बनाउनका लागि कारको लाइसेन्स लिन चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बनाएको छ ।
लाइसेन्सको दस्तुर निकै चर्को भएकाले सिंगापुरमा दक्षिण कोरियाको भन्दा तीनगुणा बढी पैसा तिरेर मात्र कार किन्न सकिन्छ ।
आवास र भोजनमा पनि ठूलो भिन्नता छ । एकातर्फ सिंगापुरवासीहरू सरकारको हाउजिङ यान्ड डिभेलोपमेन्ट बोर्डद्वारा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको सार्वजनिक आवासमा बस्न पाउँछन् र स्थानीय फूड कोर्टमा गएर लगभग ६ सिंगापुरी डलर तिरेर खान पाउँछन् । अर्कातर्फ धनी सिंगापुरवासीहरू निजी विलासी घरमा बस्छन् र महंगा रेस्टुराँमा गएर भोजन गर्छन् ।
तर सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा बस्ने र सस्ता फूड सेन्टरमा खाना खाने मानिसहरूले पनि जीवनयापनको राम्रो मापदण्ड अपनाउन सक्छन् । यसरी सिंगापुरले धनी र कम धनी दुवैका लागि व्यवस्था मिलाएको छ । कम धनी मानिसको जीवनयापन कुनै हालतमा पनि गुणस्तरहीन छैन ।
सम्पत्तिको पुनर्वितरणमा जोड दिनुभन्दा पनि सिंगापुरले असमानता अवश्यम्भावी भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसको साटो उसले क्षमतामा आधारित प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेको छ र दुवै किसिमका आर्थिक हैसियत भएका मानिसलाई बाँच्नका लागि राम्रो वातावरण उपलब्ध गराएको छ ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा बस्नका लागि सिंगापुर विशेष ठाउँ बन्न पुगेको छ । सिंगापुर बस्दाको मेरो अनुभवका आधारमा म यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छु: सिंगापुर एसियाको केन्द्रका रूपमा चम्किरहनेछ र भविष्यमा समेत धनी रहिरहनेछ ।
एसिया टाइम्समा प्रकाशित जून योङ क्वोनको आलेखलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ ५ गतेको मितिभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन हुन नसके देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न उत्पन्न हुने चिन्ता संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो भएमा देश संवैधानिक सं...
वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव प्रस्ताव गर्नुमा तीनवटा खतरनाक योजना देखिन्छ : प्रदीप ज्ञवाली (टिप्पणी)
स्थानीय तहको चुनावलाई पछि सारेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धनमा राखेको प्रस्तावले राजनीति तरंगित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले...
‘मधेश’ प्रदेशमा ४ वर्षपछि बल्ल उपलब्धि, जसपा र लोसपालाई चुनावी ब्रह्मास्त्र !
प्रदेश सभाको कार्यकाल ४ वर्ष सकिएपछि बल्ल प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ । प्रदेशसभा गठनको ४ वर्षपछि २ नम्बर प्रदेशले आफ्नो नाम ‘मधेश प्रदेश’ राख्न सफल भएको छ । प्रदेश सभाको सोमवार बस...
प्रेम आले– सामाजिक सञ्जालले 'हिरो' बनाएका एक विवादास्पद पात्र
फेसबूकमा एउटा ग्रुप छ– ‘एक्सन मन्त्री प्रेम आले’ । जसमा एक लाख ३७ हजार मेम्बर छन् । उक्त ग्रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेका हरेक गतिविधि पोस्ट हुन्छन् । उनकै बारेम...
विश्वमा शीतयुद्ध चलिरहेको भाष्य निर्माण गरिएको बेलामा अमेरिकी साम्राज्यको विरोध गर्ने तीन शक्तिहरू रुस, चीन र इरानले गत शुक्रवार र शनिवार उत्तरी हिन्द महासागरमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका छन् । उक्त अभ्यासको नाम चि...
कोरोनाभाइरस देखिएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अझै यो निर्मूल हुने लक्षण देखिएको छैन । नेपालमै पनि कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण तेस्रो लहर आएर धेरैजना बिरामी भइरहेका छन् । कोभिडबाट मुक्ति पाउनका लागि...